Tigreega oo kudhawaaqay inay difaacanayaan dhulkoda iyo dawladooda. | ogaden24
Tigreega oo kudhawaaqay inay difaacanayaan dhulkoda iyo dawladooda.
Xiisad colaadeed oo in dhowaalaba u dhaxaysay Qomiyadaha Axmarada iyo Tigreega ayaa Gaadhay Heerkii ugu xumaa, waxaana wasiirka Isgaadhsiinta iyo xidhiidhka dadwaynaha ee mamulka Tigreega uu kudhawaaqay inay difaacayaan Jiritaanka dawladnimada Tigreega iyo dhulkeeda.
Shir Jaraa’id oo uu kuqabtay magalada Maqale Fiidnimadii xalay ayuu sheegay in Aqalka Federationka Itobiya oo xaq ah kan xaqa u leh inuu kajawaabo muranka dhuleed oo dhex-mara Qomiyadaha uusan wax Jawaab ah kabixinin wax uu ugu Yeedhay daan-daansi dhul boobka ah ee mamulka Axmaradu ugu duulay dhulka Tigreega.
Waxaa uu sheegay madaxa Isgaadhsiinta iyo xidhiidhka ee mamulka Tigreegu inay Haatan iska difaacayaan weerarada Garadarada ah ee uga imaanaya Qomiyada Axmarada oo uu sheegay inay colaad Isir Nacayba u Qabaan dadka Tigreega.
Wasiirka Isgaadhsiinta Tigreega ayaa Ra’isal wasaaraha Itobiya ku Eedeeyay inuu dabada kariixaya abaabulka cusub ee ladoonayo in lagu weeraro dadka iyo dawlada Tigreega, waxaa se Wacad uu kumaray inay u dhigi doonaan casharo Taariikhiya cid kaste oo iskudayda inay Faragalin kusamayso mamulka iyo dhulka Tigreega.
Dhawaaqa iyo Hanjabaada Qayaxan ee kasoo Yeedhay mamulka Tigreega ayaa kadambaysay kadib markii deegaamo Horay uga Tirsanaan dhulka Axmarada oo ay Tigreegu si xooga ku qaateen intii kooxda TPLF xukunka haysay, ay Haatan mamulka Axmarada iyo waxgaradkoodu sheegeen inay Waajib tahay in dhulkaasi dib loogu soo celiyo Gacanta dadkii laga xoogay ee Axmarada.